I-Apple iphinda ikhuphe i-iOS 10.1.1 kunye nesiQendu seTekhnoloji yoSafari | IPhone iindaba
I-Apple iphinda ikhuphe i-iOS 10.1.1 kunye nesiqendu sokujonga kuqala kweTekhnoloji
U-Apple wayenentshukumo engaqhelekanga xa kuziwa kuhlaziyo, kwaye loo nto kukuba kwiveki kamva uphinde wakhupha isicelo se-iOS 10.1.1 kwaye asicacanga ukuba kutheni. Njengoko usazi kakuhle, olu hlaziyo luvela kwiveki ephelileyo lubandakanya ukulungiswa kwimicimbi yezokhuseleko kunye nokuzinza, ngenxa yoko bekungafanelekanga kakhulu kumanqanaba amaninzi. Kwelinye icala, ikwazise inguqulelo entsha ye-Safari Technology Preview, ibeta yeSafari ebandakanya zonke iindaba esiza kuzibona kwiinyanga ezizayo. Masifumanise ukuba kutheni iApple iphinde yakhupha i-iOS 10.1.1 ngaphandle kwesaziso.
Ngamanye amaxesha iApple kuye kwafuneka isebenzise le milinganiselo xa isifaki okanye uhlaziyo lokongeza unike impazamo xa uyifaka, ngekhe ibe kokokuqala ukuba i-iPhone ibe yinyani yokwenyani ngelixa sifaka uhlaziyo, ukuba akunjalo, ukuba uxelele abanini be-iPad Pro kunyaka ophelileyo. Esi sesona sizathu sokuba abasebenzisi abaphuculweyo baye kwi-iOS 10.1.1 Abasifumananga esinye isaziso malunga noku kuhlaziywa kwesoftware.
Ngokubanzi okwenziwayo kukutshintsha igama lohlaziyo, kuba bongeza izisombululo ezincinci kwingxaki ethile, kodwa abatshintshi kwanto kwinqanaba lophuhliso. Ngele ndlela, Ukuba uhlaziye kwi-iOS 10.1.1 ngelo xesha, ungakhathazeki, awuzukuphinda uhlaziye kwakhona. Nangona kunjalo, ukuba khange uhlaziye okanye bekukunika iingxaki, lixesha lokuba uhlaziye, siyakhumbula ukuba ukuba nenkqubo yokusebenza ehlaziyiweyo inezixhobo ezikhuselekileyo, ke sicebisa ukuba sihlaziye le nguqulo, kwaye ungakhathazeki, ukuba nayiphi na inguqulelo ye-iOS enengxaki, siya kuba ngabokuqala ukukuxelela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple iphinda ikhuphe i-iOS 10.1.1 kunye nesiqendu sokujonga kuqala kweTekhnoloji
Izicelo zeApple TV sele zivumele ukwabelana ngamakhonkco kunye nokukhuphela kwi-iPhone